विराट गुप्तेश्वर कोटीहोममा हरिगोविन्द कर्माचार्यले गरे ५० लाखको जग्गा दान ! – ebaglung.com
विराट गुप्तेश्वर कोटीहोममा हरिगोविन्द कर्माचार्यले गरे ५० लाखको जग्गा दान !
२०७६ जेष्ठ ६, सोमबार २२:२२	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
शीला पाण्डे पर्वत २०७६ जेठ ६ । गत जेठ १ देखि संचालन भएको विराट गुप्तेश्वर कोटीहोम महायज्ञ मेलाको आज छैठौ दिन भक्तजनहरुको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । कुस्मा नगरपालिका वडा नं ४ गुप्तेश्वर परिसरमा संचालन भएको यज्ञको छैठौ दिन कुस्मा नगरपालिका वडा नं ४ निवासी हरि गोविन्द कर्मचार्यका परिवारले रु ५० लाख पर्ने १ रोपनी जग्गा दान गरेका छन् । कुस्मा नगरपालिका वडा नं। ४ मा पर्ने हवन कुण्ड चलिरहेको जग्गा दान गरेका हुन । उनका छोरा सागर कर्मचार्यको नाममा रहेको उक्त जग्गा आज दान गरेको उद्घोष गरिएको थियो ।
छोराहरु सागर कर्माचार्य, नविन कर्माचार्य र गया कर्माचार्य लगायतका कर्माचार्य परिवार यज्ञस्थलमा गई आशिरवाद ग्रहण गरेका थिए । यज्ञस्थलमा रहेको जग्गा समेत उनले यज्ञ संचालनका लागी सहयोग गरेका थिए । फराकिलो मनका धनी कर्मचार्य परिवारले पर्वत जिल्लाको सदमुकाम कुस्मामा विश्वकै अग्लो शिवपार्वतीको मर्ति वन्ने भएकाले त्यो अवसरका लागी जग्गा दान गरेको छोरा सागर कर्माचार्यले वताए । कर्माचार्य परिवारलाई वाजा गाजा सहित यज्ञस्थल परिक्रमा गराईएको थियो ।
विराट महायज्ञ मुल आयोजक समितिका संयोजक पृथ्वी नारायण शर्माले दयालु मनका धनी कर्मचार्य परिवारले होमन कुण्ड संचालन भएकै जग्गा दान गरेकोमा वधाई दिदै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। यस्तै मनकारी दानवीर भएमा सिस महल देखि सत्संग भवन वन्नमा थप सहयोग पुग्ने विराट महायज्ञका महासचिव अच्यूत तिवारीले वताए ।
त्यसै गरि शिव कूमार जोशीले १०८ के जि।को घण्टा दान गरेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा विराट महायज्ञका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । विराट महायज्ञ आगामी जेठ ११ गते सम्म संचालन हुनेछ ।
नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हक र अधिकार विश्वको कुनै संविधानमा नभएको सांसद सापकोटाको दावी !
काँग्रेसी नेताहरु जागरण अभियान लिएर आज बरेङ डाँडामा … !